MARVEL Future Fight 5.2.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ MARVEL Future Fight
MARVEL Future Fight ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ခုကမော်ကွန်း Blockbuster အရေးယူ-RPG ပုအံ့ဩခြင်းဠာထဲကနေစူပါသူရဲကောင်းများနှင့် villain featuring!
သေစားသေစေသော, က Galaxy ၏ Guardians, လူမဆန်, ကာကွယ်, X-Men, Spider-Man နှင့်ပိုပြီး!
အဆိုပါအံ့ဩခြင်းဠာထဲကနေ 190 ကျော်ဇာတ်ကောင်ကစားရန်မရရှိနိုင်များမှာ!
S.H.I.E.L.D. ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ဒါရိုက်တာနစ်ခ် Fury, အနာဂတ်ကာလအနေဖြင့်အရေးပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျတျောမူပြီ ... ငါတို့သည်သိနားလည်အဖြစ် convergence ကမ္ဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးနေပါသည်! သင့်ရဲ့ဝဠာကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါ!
သင့်ရဲ့အဆုံးစွန်အဖွဲ့စုဝေးဖို့ 190 ကျော်အံ့ဩခြင်းစူပါသူရဲကောင်းများနှင့်စူပါ villain စုဆောင်းပါ။
- အထူးဆုကြေးငွေသက်ရောက်မှု၏အားသာချက်ယူသေစားသေစေသောသို့မဟုတ် X-Men နဲ့တူဂန္အသင်းများကို Build ။
Epic Quests အတွက်အစွမ်းထက်ဇာတ်ကောင်ကို upgrade!
- ဗိုလ်ကြီးအံ့ဩခြင်းကနေဆရာဝန်ထူးဆန်းရန်, လူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးစူပါသူရဲကောင်းများ Get နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာက Epic Quests ကစားနေချိန်မှာသူတို့ကိုတက်မြင့်။
- သင်အမျိုးမျိုးသောမစ်ရှင်အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းစေအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်ကောင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စူပါအင်အားကြီးတိုက်ဖျက်မည်။ Captain America ရဲ့ဒိုင်းလွှားနှင့်အတူတရားမျှတမှု၏နာမ၌ Iron Man ရဲ့ Unibeam နှင့်ကား Bash ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ပေါက်ကွဲမှုရန်သူများကို!
- သင်ကကမ္ဘာကြီးအပေါ်ယူသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်မည့် PvP Arena သည် Modes အတွက်အတွေ့အကြုံ ပို. ပင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအရေးယူ။
- တစ်ဦးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကို Join နှင့်မိတ်ဆွေများပါစေ။ မဟာမိတ် Conquest အခြားမဟာမိတ်အဖွဲ့များနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့သည်နေရာဖြစ်သည်ဘုန်းအသရေယူပါ။
သာအံ့ဩခြင်းအနာဂတ် Fight တှငျတှေ့မူရင်းအသစ်သောပုံပြင်များ!
- သစ် Avengers, လူမဆန်နှင့်ပင် Spidey ရဲ့ရန်သူများ featuring အထူးမစ်ရှင်များမှတဆင့် Play!
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp
MARVEL Future Fight အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
MARVEL Future Fight အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
MARVEL Future Fight အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
MARVEL Future Fight အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 1.28k 977.41k
MARVEL Future Fight ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း MARVEL Future Fight အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp
Release date: 2019-07-02 10:16:42
လက်မှတ် SHA1: 6D:6F:ED:86:31:DF:E0:C2:15:BF:EE:DA:5A:D2:BB:7B:6C:E5:7F:D9
အဖွဲ့အစည်း (O): "Netmarble Monster
MARVEL Future Fight APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ